Nooca Dalabka Bahdilaada Ah Ee Ay Arsenal U Dirtay Wilfried Zaha, Ayaa Ah Mid Qof Kastaba Ka Yaabin Kara. - Gool24.Net
Nooca Dalabka Bahdilaada Ah Ee Ay Arsenal U Dirtay Wilfried Zaha, Ayaa Ah Mid Qof Kastaba Ka Yaabin Kara.
Faah faahin dheeraad ah ayaa laga helay nooca dalabka ay Arsenal ka gudbisay xidiga xulka Ivory Coast iyo kooxda Crystal Palace ee Wilfried Zaha kaas oo ay suurtogal tahay in uu dad badan layaab ku noqdo.
Jamaahiirta Arsenal ayaa khaatiyaan waqti dheer kooxdooda kaga taagnaa gacan adayga suuqa kala iibsiga iyo dalabada hoose ee ay ka gudbiyaan ciyaartoyda tayada sare leh taas oo keenta in ay kooxo kale ku biiraan.
Laakiin Arsenal ayaan wali ka leexan dariiqii ay ciyaartoyda badan ee magaca wayn ugu soo seegtay in ay kooxdeeda keento waxayna dalab qayb ka mid ahi layaab tahay u dirtay kooxda Crystal Palace.
Wargayska Daily Mail ayaa qayb ka mid ah qorshaha Arsenal ee dalabka Wilfried Zaha waxay ku sifeeyeen mid ‘Bahdilaad ama ceeb ah’ kadib markii la ogaaday qaabka ay Gunners doonayso in ay ku bixiso lacagta Zaha.
Arsenal ayaa Crystal Palace u dirtay dalab 40 milyan gini ah oo ay ku doonayso saxiixa Wilfried Zaha laakiin marka horeba lacagtani waxay leegtahay ama xataa ka hoosaysaa kala badhka qiimihii ay Crystal Palace ku doonaysay iibka Zaha.
Laakiin arinta qariibka ah ee uu wargayska Daily Mail bahdilaada ku tilmaamay ayaa ah in maamulka Arsenal ay doonayaan in lacagta ah kala badhka qiimihii Wilfried Zaha in ay haddana ku bixiyaan muddo shan sanadood ah.
In Arsenal ay dalab kala badhka qiimaha Wilfried Zaha ah u dirtay Crystal Palace waxaaba ka sii xumaatay in ay lacagtan u qorshaysteen in ay muddo shan sanadood ah ku kala bixiyaan taas oo aan la filayn in ay kooxda Crystal Palace sinaba u aqbali karto.
Crystal Palace ayaa todobaadkan 50 milyan waxay Man United kaga iibisay difaaca midig ee Aaron Wan-Bissaka waxayna Zaha u arkaan xidig ay 100 milyan ilaa 80 milyan gini ku iibin karaan laakiin dalabka Gunners ayaa ah mid layaab ku noqonaya kooxda C.Palace.
Khabiirada kubbada cagta iyo waliba halyayo hore oo kooxda Arsenal ah ayaan aaminsanayn in nooca dalabka Arsenal uu yahay mid sabab u noqon kara in Wilfried Zaha uu ku soo biiri karo kooxda uu ku riyoodo ee Arsenal.
Man United ayaa boqolkiiba 25% ku yeelan doonta iib kasta oo uu Wilfried Zaha kaga baxo Crystal Palace taas oo keenaysa in Crystal Palace ayna aqbali doonin dalabo hoose si ay lacag fiican uga heli karto iibka Zaha.
Si kastaba ha ahaatee, iyada oo markii hore lala yaabanaa in maamulka Arsenal ay Crystal Palace u direen dalab ku qiimaysan kala badhka lacagta lagu doonayo Wilfried Zaha waxaa haddana la sii yaab kale noqday in ay lacagtan doonayaan in ay shan sanadood ku kala bixiyaan.